जिल्लाको चौतर्फी विकासका लागि महोत्सब ः बुढाथोकी | गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक
जिल्लाको चौतर्फी विकासका लागि महोत्सब ः बुढाथोकी
| 317 Views | Published Date : 19th February 2018 |
टंकसिंह बुढाथोकी बाणिज्य उपाध्यक्ष, दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघ दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघको आयोजनामा दाङ व्यापारीक तथा पर्यटन महोत्सव एवं प्रदेशस्तरीय औद्योगीक कृषि प्रर्दशनी २०७४ सञ्चालन भैरहेको छ ।
फागुन ३ गते देखि सुरु भएको महोत्सब १३ गते सम्म सञ्चालन हुनेछ । करिब दुई सय स्टलहरु रहेको महोत्सबमा स्थानिय कृषि उत्पादनका सामग्री, पर्यटन प्रर्बधन, ब्यबसायीक रुपमा आत्मनिर्भर र जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्रको सन्देश बाड्ने योजनाका साथमा महोत्सब आयोजना गरीएको छ ।
दैनिक १० हजार भन्दा बढि दर्शकहरुले अबलोकन गरीरहेको महोत्सब कसरी सञ्चालन भैरहेको छ त ? आयोजक सस्था दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघका बाणिज्य उपाध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकीसंग सहसम्पादक नवीन अभिलाषीले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप ः
दाङ व्यापारीक तथा पर्यटन महोत्सव एवं प्रदेशस्तरीय औद्योगीक कृषि प्रर्दशनी २०७४ कस्तो चलिरहेको छ ?
जुन उदेश्य र योजना अनुसार महोत्सब सञ्चालन गरेका छौँ । त्यो अनुसारको महोत्सबको माहोल बनेको छ । दर्शकहरुको भिड रहेको छ भने यसले बाड्ने सन्देश सामाजिक रुपमा हामीले प्रदान गर्न सकेका छौँ ।
महोत्सबमा राखिएका स्थानिय कृषि उत्पादन, पर्यटन प्रर्बधनका लागि गरीएको कार्यक्रमहरु, स्थानिय व्यवसायको प्रबर्धनका लागि राखिएका स्टलहरु र दैनिक रुपमा सञ्चालन भैरहेका प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम र सास्कृतिक प्रस्तुतीहरु समेत सभ्य र भब्य रुपमा सञ्चालन भैरहेको हामीले पाएका छौँ । र यो सबैले महसुस गर्ने गरी सबै भन्दा व्यवस्थित महोत्सब बनाउने प्रयासमै रहेका छौँ ।
विभिन्न समयमा महोत्सब सञ्चालन भैरहेका छन । यो महोत्सबको आबस्यकता किन प¥यो ?
दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघले यसअगाडी पनि महोत्सब सञ्चालन गर्दै आएको छ । २०६३, २०६९ र ०७२ को महो त्सवबाट केहि सामाजिक र भौतिक विकासका पुर्वाधार निर्माणको काम भएको छ । स्थानियस्तरमा सञ्चालन भैरहेका यस्ता महोत्सबले विकासको एउटा खाका कोर्ने काम गर्दै आएको छ ।
एउटा उदेश्य लिएर सञ्चालन भैरहेका यस्ता महोत्सबहरुले ति उदेश्य पुरा गर्नको लागि जनताको एक्यबद्धता र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने काम पनि हुँदो रहेछ । साथ साथै यसले स्थानिय स्तरमा रहेका कृषि उत्पादनका बस्तु तथा सेवाहरुको प्रचारप्रसार, पर्यटन प्रर्बधन, कला, साहित्य र सस्कृतिको संरक्षण र विकासमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्छ । पछिल्लो चरणमा जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्रको कुरा जोडतोडले उठिरहेको छ ।
त्यसलाई नागरिक स्तरबाट अगाडी बढाउनको लागि सन्देश बाड्न र माथी भनिए अनुसारको विकासमा भुमिका खेल्नको लागि यो महोत्सब सञ्चालन गर्नु परेको हो ।
यो महोत्सबलाई आर्थिक संकलन तर्फ खासै जोड दिनु भएको छैन, हैन ?
हो हामीले महो त्सवलाई नाफाका लागि मात्रै जान खो जे को छैनौँ । त्यदि त्यसो भए हामीले अहिले पनि चार÷पाँच सय स् टलहरु लगाउन सक्थ्यौ । तर दुई सय १४ वटा स् टल मात्रै छन । धे रै स् टल राखे र बाहिरको सामान बे च्नु भन्दा थो रै स् टल राखे र स् थानीय उत्पादनलाई अगाडि ल्याउने काम हामीले गर्दै छौ ं ।
ऋहिले दाङमा औ द्यो गिक क्षे त्रको स् थापना गर्नुपर्छ भने र दाङ उद्यो ग वाणिज्य संघले योजना बनाउँदै आएको छ र त्यसको प्रक्रिया समेत अगाडी बढेको छ । भर्खरै सम्भाव्यता अध्ययनको टो ली दाङ आयो र १७ लाख ९० हजार रुपै याँ सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रकम पनि विनियो जन गरिएको छ ।
घोराहीका व्यवसायीहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाईरहनु भएको छ ?
सम्पुर्ण व्यवसायीहरुको साथ र सहयोगकै कारण महोत्सब सफल भैरहेको छ । त्यसैले व्यवसायीहरुको भुमिका बलियो भएकै कारण महोत्सबको आयोजना गरीएको हो । र यो महोत्सब व्यवसायीहरुको हकहितको पक्षमा महोत्सब लगाईएको हो । व्यवसायीहरुको राय, सल्लाहकै आधारमा बाहिरबाट आउने स् टल कम गर्ने , स् थानीयलाई धे रै स् टल दिने र त्यसमा पनि लघु उद्यमीहरुलाई थप प्राथमिकता दिने काम भएको छ ।
कृषि, दो स्रो लघु उद्यम त्यसपछि वाणिज्य अन्तर्गतका व्यवसायलाई दिने काम गरिएको छ । त्यसमा पनि संख्या तो किएको छ । यसले स् थानीयहरुको चाहना पूरा भएको छ ।
महोत्सबको प्रमुख आकर्षणको रुपमा के के रहेका छन ?
दाङ व्यापारीक तथा पर्यटन महोत्सव एवं प्रदेशस्तरीय औद्योगीक कृर्षि प्रर्दशनी २०७४ को नारा उद्योग व्यापार, कृषि एवं पर्यटनकोे विकास परनिरभरमुखी अर्थतन्त्रको निकास भन्ने राखेका छौँ ।
महोत्सवका अवसरमा दाङ जिल्लाको आर्थीक विकाससंग सम्वन्धीत अन्तरक्रिया, यस क्षेत्रको पर्यटकीय स्थलहरुलाइ अवलोकन गर्न प्याकेजको व्यवस्था, हेलीकप्टरवाट यसक्षेत्रको पर्यटकीय एवं धार्मीक स्थलहरुको अवलोकन, योग शिविर तथा धार्मीक प्रवचन नेपालको सवैभन्दा होची महिला इश्वरीमाया छिनालसंग प्रत्यक्ष भेट, स्थानीयस्तरमा उत्पादीत वस्तुहरुको प्रदर्शनी, थारु मगर नेवार मुस्लीम, यादव जातीको खानाको परिकार, जातीय पहीचान झल्काउने सास्कृतिक नृत्य तथा झाँकीहरु सास्कृतिक कार्यक्रम स्थानीय तथा चर्चीत राष्ट्रीय कलाकारहरुको प्रस्तुती, विषयगत विज्ञहरुवाट पर्यटन, कृर्षि पशुपालन प्रशोधन वजारीकरणका विषयमा जानकारी एवं प्रशिक्षण दिइने, खुल्ला वाल कविता प्रतीयोगीता, प्रदेशस्तरीय खुल्ला कविता प्रतियोगीता, प्रदेशस्तरीय खुल्ला गजल प्रतियोगीता लगाएतका साहीत्यीक कार्यक्रमहरुको समेत आयोजना गरिएको छ ।
यो महो त्सवबाट उपभोक्ताहरुले के कस्ता लाभहरु लिन सक्छन ?
हामीले स्थानिय रुपमा उत्पादन गरेका कृषि उत्पादनका सामग्रीहरु छन् । त्यसको प्रचार प्रसार आबस्यक छ । अहिलेको जमाना भनेको प्रचारको जमाना हो । प्रचार भए मात्र त्यसको बजारीकरण हुन्छ । यहाको तोरी, मह लगाएतका मौलिक र पहिचानको रुपमा उत्पादन भएका बस्तुहरुको बजारका लागि हामीले काम गर्दै आईरहेका छौँ । त्यस्तै हस्तकलाका सामानहरु प्नि छन् ।
त्यसको प्रचारप्रसार र बजारीकरण महत्वपुर्ण पाटो हो । हामीले यहाको पर्यटकिय सम्पदाहरुको प्रत्यक्ष रुपमा अबलोकनको व्यवस्था समेत मिलाएका छौँ । अहिले दंगालीहरुको लागि पाँच दश हजार रुपैया खासै केहि पनि हैन । तर त्यो पैसाले जिल्ला र छिमेकी जिल्लामा रहेका महत्वपुर्ण तर पर्यटकिय स्थलहरुको अबलोकन छन ।
यसको साथै हाम्रो कला साहित्य र सिर्जनाको विकासका लागि पनि कार्यक्रम भैरहेका छन । र यी सबै उपभोक्ता तथा हाम दंगालीहरुको लागि लाभको विषय हो ।